Al Shabaab oo fuliyay xukun gacan goyn ah | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Al Shabaab oo fuliyay xukun gacan goyn ah
Al Shabaab oo fuliyay xukun gacan goyn ah
Ururka Al-shabaab ayaa fagaare ku yaalla degaanka Kuunya-barrow ee gobolka Shabeelaha Hoose waxay shalay gelinkii dambe xukun gacan goyn ah ugu fuliyeen laba oo ay ku eedeeyeen in ay ku kaceen fal xatooyo ah.
Goobta xukunkan uu ka dhacayay oo aheyd meel fagaare ah ayaa waxaa isugu yimid boqolaal ruux oo dadka degaanka ah, kuwaasi oo daawanaayay qaabka xukunka uu u dhacayay.
Maxkamadda Shabaabka ee degaanka Kuunya-barrow ayaa la hor geeyay labadan nin oo lagu eedeeyay in ay jabsadeen Dukaan ku yaalla degaanka Ambareeso oo ku aadan albaabka laga galo degmada Baraawe ayna ka qaateen 17 Milyan Lix Boqol iyo Todobaatan iyo Saddex Kun oo shillinka Soomaaliga ah.
Qaadiga xukunka riday ayaa waxa uu sheegay in maxkamadda uu u soo dacwooday ninka dukaanka laga jabsaday oo lagu magacaabo Cabdalla Bakar Cabdalla, isagoo ku eedeynaya Maxamuud Maxamad Xassan oo 54 sano jir ah iyo Xassan Maxamad Yuusuf oo 45 sano jir ah.
Qaadiga Maxkamadda oofagaaraha uu xukunku ka dhacayay ka akhriyay dambiga lagu labadan nin ayaa sheegay in Maxkamadda ay jawaab ka dalabtay labadan nin oo kala deganaa Baardheere iyo Jubooyinka, ayna ay qirteen, waxaana ay sidaasi ku muteysteen in uu qaadigu ku xukumo iney ku dheceen fal xatooyo ah, sidaasi darteedna mid kasta gacanta midig laga jaro iyo in ay milkiilaha u celiyaan lacagtiisii.
Islmarkiiba waxaa fagaaraha xukunka uu ka dhacayay raggan lagula fuliyay go’aankii Maxkamadda, waxaana gacanta ka jaray rag Shabaab kja tirsan oo u tababaran falalka nuucaan oo kale ah.
Maxkamadaha Shabaab ayaa badanaa xukunada ay qaadaan waxa ay yihiin kuwa hal dhinac ah, maadaama dadka dambiyada ay ku soo eedeeyaan aanan laga hayn qiraal cad oo ku aadan falka lagu soo eedeeyo.